Umaki: izithombe | Martech Zone
NgoLwesibili, Januwari 11, 2022 NgoLwesibili, Januwari 11, 2022 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa edlule, ngahambela ingqungquthela yamazwe ngamazwe futhi babenesiteshi esizenzakalelayo lapho wawukwazi khona ukuthwebula izithombe ezimbalwa. Imiphumela ibimangalisa… ubuhlakani obungemuva kwekhamera bekwenze ukuthi ubeke ikhanda lakho endaweni eqondisiwe, ukukhanya kwalungiswa ngokuzenzakalelayo, futhi kwakhanya… izithombe zathathwa. Ngazizwa njenge-supermodel ye-dang baphume bebahle kakhulu… futhi ngawalayisha ngokushesha kuwo wonke amaphrofayili. Kodwa kwakungemina ngempela.
NgoLwesithathu, Agasti 18, 2021 NgoLwesithathu, Okthoba 13, 2021 Douglas Karr
Umngani omuhle uChris Reed wangithumelela imiyalezo engibuza ukuthi ngabe ngike ngazama i-Canva futhi wangitshela ukuthi ngiyayithanda. Uqinisile impela… ngilihlolile ngamahora ambalwa futhi ngahlabeka umxhwele ngemiklamo yobungcweti engikwazi ukuyakha kungakapheli mizuzu! Ngingumlandeli omkhulu we-Illustrator futhi sengikusebenzise iminyaka eminingi - kepha ngiyinselele yokuklama. Ngikholwa ukuthi ngazi umklamo omuhle
Ukulungiselela Izithombe Zakho Iwebhu: Amathiphu Namasu
NgoLwesithathu, Januwari 20, 2010 ULwesine, May 14, 2015 UBill English
Uma ubhalela ibhulogi, uphatha iwebhusayithi, noma uthumela ezinhlelweni zokuxhumana nabantu ezifana ne-Facebook noma i-Twitter, izithombe kungenzeka ukuthi zidlala ingxenye ebalulekile yokusakazwa kokuqukethwe kwakho. Ongase ungazi ukuthi alikho inani le-stellar typography noma ukwakheka okubukwayo okungakha izithombe ezifudumele. Ngakolunye uhlangothi, ukuthwebula izithombe okubukhali nokucacile kuzothuthukisa abasebenzisi? umbono wokuqukethwe kwakho futhi uthuthukise ukubukeka nokuzwakala kwakho konke